Ndị na -emepụta ụgbọ ala na -ebuli ụgbọ elu & Ụlọ ọrụ na -ebuli ụgbọ ala China
Platinụ Ibu Ibu Ibu Ebube nke China Daxlifter Super Low Profaịlụ
Ebube China ebuli E Ekere nke Daxlifter mere
Tebụl ebuli ọkọlọtọ
Single Isịịfụ ebuli Isiokwu
Tebụl ebuli okpukpu abụọ
Tebụl ebuli atọ
Tebụl ebili mmiri anọ
Isiokwu mkpali dị ala
U Ụdị tebụl mkpị
Tebụl ebuli profaịlụ dị ala
Isiokwu mkpali Pit
Isiokwu ahaziri Isịịka ebuli Isiokwu
Isiokwu ebuli tebụl
Okpokoro Arụrụ Isịka ebuli tebụl
China Daxlifter Crawler Type Rough Terrain Scissor Lift with Automatic Leg
Ebuli Mobile Scissor
Obere mkpanaka mkpanaka mkpanaka
Ebuli Eletriki zuru oke
Obere Scissor Lift
Onwegoro obere mkpisi mkpali ebuli
Ebuli Isisi Eweliri
Ebuli Hydraulic Drive Scissor Lift
Igwe Ọdụdọ na -ebuli Scissor Lift
Ebuli elu ala dizel mmanụ mkpị
Aluminom Ọrụ Platform
Otu Mast Aluminium Aerial Work Platform
Nhazi dị elu Single Platform Platform Work Aluminum
Nhazi nhazi dị elu Platform Work Aerial Aluminium
Ntuziaka na -ebuli Platform Work Aerial Aluminom
Slef Propelled Aluminom Aerial Work Platform
Onye nhọpụta ịtụ
Onye na -ahọpụta onwe onye na -atụpụta onwe ya
Welie ibu ibu
Ebuli ụgbọ elu kwụ ọtọ abụọ
Ebuli ụgbọ elu anọ kwụ ọtọ
Boom Lift edepụtara onwe ya Daxlifter
Mbuli elu Towable
Onwe onye kpaliri agbagoro Ọganihu Mbuli elu
Ọmarịcha Ọganihu Telescopic Propelled
Ebuli oche nkwagharị
Welite oche nkwagharị kwụ ọtọ
Ụdị Mkpa Mwute oche nkwagharị
Ọdụ ụgbọ mmiri Ramp
Ebe a na -adọba ụgbọala
Oghere ọdụ ụgbọ mmiri
Omenala China mere ọdụ ụgbọ ala anọ ebuli DaxLifter
Igwe eji ebugharị ụgbọ ala China Daxlifter Rotary Platform maka ihe ngosi ụgbọ ala
Mbuli Ikuku adọba ụgbọala abụọ
Ebuli Iche Iche Ikuku Nke anọ
Tiltable Post adọba ụgbọala ebuli
Ebuli ụgbọ ala
Ntọala ala 2 Ebuli ụgbọ ala
Clear Floor 2 Bugharịa ụgbọ ala
Ebuli ọrụ ụgbọ ala bulie anọ post Daxlifter
Ebuli ụgbọ ala ruo Daxlifter Floor
China Daxlifter Super Low Profaịlụ Ewelite Ngwaọrụ ụgbọ ala ebuli abụọ
Ebuli ọgba tum tum
Ibugharị ụgbọ ala Scissor Car
Ntinye ụgbọ ala Scissor na -ebuli olulu nwere ọrụ ibuli elu nke abụọ
Ọrụ ụgbọ ala Scissor na -ebuli profaịlụ dị ala Daxlifter
Obere ụgbọ ala na -ebuli elu ebili Middle Daxlifter
Crane Ụlọ ahịa
Omenala China Daxlifter mere ọtụtụ ọrụ iko iko na -ebuli ikuku ikuku
Agụụ Glass Lifter
Igwe ihe ọctionụ Glassụ iko
Ụgbọ ala pụrụ iche
Ụgbọ ala na -arụ ọrụ dị elu
Ụgbọ ala na -agba ọkụ
Ụgbọ ala ọgụ ụfụfụ
Ụgbọ mmiri na -alụ ọgụ ọkụ
Mkpuchi ọgba tum tum
Ụgbọ ala pallet
Ebube akwụkwọ ntuziaka China Daxlifter Pallet Trolley
Ụgbọ ala pallet eletrik Daxlifter dị elu
Aka Trolley Pallet Truck China Daxlifter Brand nwere ike batrị
Villa Igwe Mbuli
Omenala China Daxlifter mere igwe mbuli ụlọ
Igwe eji arụ ọrụ ikuku ikuku nke Aluminom
Ebe a na -adọba ụgbọala na sistemụ ụgbọ alabụ ngwaahịa dị mkpa na ndụ anyị kwa ụbọchị na -eme ka ohere maka ebe a na -adọba ụgbọala na -ebelata. Enwere ike kewaa akụrụngwa na-adọba ụgbọala nwere akụkụ atọ n'ime igwe na-adọba ụgbọala nwere akụkụ atọ, ihe akpaaka nwere akụkụ atọ yana ngwa na-adọba ụgbọala nwere akụkụ atọ zuru oke, yana ngwa eji adọba ụgbọala nwere akụkụ atọ, yana n'ụzọ zuru oke. Enwere ike kewaa akụrụngwa na-adọba ụgbọala nwere akụkụ atọ n'ụdị okpukpu abụọ ma ọ bụ akwa nwere akụkụ atọ zuru oke, akụrụngwa na-adọba ụgbọala nwere akụkụ atọ kwụ ọtọ yana ihe nrụpụta pụrụ iche nwere akpaka ụgbọ ala atọ.
wo Post Car Lift na -eji ụzọ ụgbọ ala hydraulic, mgbapụta hydraulic na -emepụta mmanụ mgbali elu na -akwagharị cylinder hydraulic ka ọ na -anya ụgbọ ala mbadamba ụgbọ ala elu na ala, mezuo ebumnuche nke ịdọba ụgbọala. nwere ike banye ma ọ bụ pụọ. Nye onyinye ahaziri iche
Ụgbọ ala China Daxlifter Rotary ụgbọ elu na -ebuli ihe pụrụ iche maka ihe ngosi akpaaka, nha na ike nwere ike ịhazi ya site na ihe ị chọrọ. Ulo elu igwe na-agbagharị ụgbọ ala na-eji ezigbo ngwa mbubata mbubata iji hụ na ikpo okwu nwere ike na-arụ ọrụ nke ọma ma na-agbagharị n'otu ọsọ mgbe ọ na-arụ ọrụ.
Mbuli ụgbọ ala China mere ụgbọ ala anọ emere ka ọ dị obere na -adọba ụgbọala nke na -ewu ewu na mba Europe na ụlọ ahịa 4s. , mee ka anyị mata nkọwapụta data ịchọrọ
Tiltable Post Parking Lift na -eji ụzọ ụgbọ ala hydraulic, mgbapụta hydraulic na -emepụta mmanụ mgbali elu na -akwalite cylinder hydraulic ka ọ na -anya ụgbọ ala na -adọba ụgbọala na ala, na -emezu ebumnuche nke ịdọba ụgbọala. nwere ike ịbanye ma ọ bụ pụọ.
4 Ebe a na -adọba ụgbọala na -ebugharị bụ otu n'ime mbuli ụgbọ ala kacha ewu ewu n'etiti ndị ahịa anyị. Ọ bụ nke akụrụngwa na -adọba ụgbọala valet, nke nwere sistemụ nchịkwa eletriki. Ọ bụ ụgbọ mmiri mgbapụta hydraulic na -ebugharị ya. Ụdị ebe a na -adọba ụgbọala na -adabara ma ụgbọ ala ọkụ na ụgbọ ala dị arọ.
Enwere ọtụtụ uru nke ebe a na -adọba ụgbọala : 1.Ndị na-egosi teknụzụ na akụ na ụba dị elu nwere akụrụngwa na-adọba ụgbọala nwere akụkụ atọ nwere nnukwu ikike ịdọba ụgbọala. Obere akara ukwu, dịkwa Akụkụ ụgbọala na-adọba ụgbọala nwere akụkụ atọ Ngwa na-adọba ụgbọala nwere akụkụ atọ (foto 8) Debe ụdị ụgbọ ala niile, ọkachasị ụgbọ ala. Agbanyeghị, itinye ego a bụ ihe na -erughi ebe ndọba ụgbọala n'okpuru ala nke nwere otu ikike, oge ihe owuwu dị mkpụmkpụ, ike ya pere mpe, ohere ala dịkwa obere karịa nke ebe ndọba ụgbọ ala. 2. A na -ahazi ọdịdị ahụ na ụlọ ahụ, njikwa ya dịkwa mma. Ngwa ụgbọala na-adọba ụgbọala nwere akụkụ atọ kacha dabara maka nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ụlọ ọrụ, na ebe ndị njem. Ọtụtụ ngwaọrụ anaghị achọ ndị ọrụ pụrụ iche, naanị ọkwọ ụgbọ ala nwere ike mezue ya. 3. Ụlọ ọrụ nkwado zuru oke na "akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ" enyi na gburugburu ebe obibi akpaka akụkụ atọ nwere sistemụ nchekwa zuru oke, dị ka ngwaọrụ nkwenye ihe mgbochi, ngwaọrụ braking mberede, ngwaọrụ mgbochi ọdịda ọdịda, ngwaọrụ nchedo oke, ngwaọrụ nchedo ọnya, ogologo ogologo na nke dị elu. ngwaọrụ nchọpụta ụgbọala na ihe ndị ọzọ. Enwere ike iji aka mezue usoro nnweta ahụ, ma ọ bụ jiri ngwa kọmputa arụchaa ya na akpaghị aka, nke na -ahapụkwa ohere dị ukwuu maka mmepe na imepụta ya n'ọdịnihu. Ebe ọ bụ na ụgbọ ala na -agba naanị obere ọsọ maka obere oge n'oge usoro nnweta, mkpọtụ na ikpochapu ọkụ pere mpe.